Home » Opinion - Op-ed » မတူရင် မတုနဲ့ ယူလျင် စုတပည့် Right Place @ Right Time.
ဒေါ်စုက.. သူ့ရုံးအကြီးအကဲ ဒေါက်တာတင်မာအောင်ကို.. အချိန်ကပ်ပြီးရာထူးဖယ်ပစ်ပလိုက်တာဟာ.. (သာမန်နိုင်ငံရေးအတွေးနဲ့ဆိုရင်တော့… )သမ္မတရာထူးအတွက် လျှာလိုက်တာပါပဲ..။
အဲဒီလူတွေက.. အဖွဲ့ချုပ်လူနဲ့.. သူတို့ရွေးပေးထားတဲ့သူတွေမို့.. ဒေါ်စုကို .. ဒုသမ္မတ ကောက်တင်ပေးလိုက်လည်း.. စစ်ဆေးမယ့် အခြေခံဥပဒေခုံရုံးက မရှိနဲ့.. ဘာဘာ.. ဘာဖြစ်တာလိုက်လို့..။
သူရဘွဲ့ရတွေဆိုတာ.. တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သားစစ်စစ်တွေမို့.. တပ်အပေါ်သစ္စာနက်နက်ရှိတာသေချာသူတွေပေါ့…။
၆၀(ဃ) ဒုတိယသမ္မတများသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်
ဒေါက်တာ တင်မာအောင် ငယ်လွန်းတယ်၊ သမတ မဖြစ်နိုင်။ ရွေးခဲ့လျင် သူ့ထက် အသက်ကြီး ဒေါ်စုအောက် ငယ်သူ ဖြစ်နိုင်သည်။ လူမျိုးအားဖြင့်လည်း ရခိုင်မို့ ထိပ်ပိုင်းနေရာ ကိုတာ ကုန်ပြီ။ အဓိက ကတော့ အသက် အတွေ့အကြုံ ပေးဆပ်မှု အဆင်သင့် မဖြစ်သေး။ အစိုးရဝန်ထမ်း အ
.ရွှေဥမှန်းကြီးကို… ယုံရခက်ခက် ဖြစ်နေတာ…ကျနော် တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူးပဲ….
တပ်သတင်းစာအလိုအရ.. တပ်ကတော့.. ၅၉(စ) မပြင်တော့မယ့်သဘောရှိတယ်…။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီ အစိုးရဖွဲ့ပါက နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ရာထူးကို NLD နှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင် မဟုတ်၊ NLD ထောက်ခံအားပေးသူ တစ်ဦးကို လျာထားကြောင်းကိုလည်း NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးဝင်းထိန်က ပြောကြားသည်။ – See more at: http://thevoicemyanmar.com/index.php/news/item/9726-das#sthash.9JFcixO9.xJGimMvd.dpuf
ကြည့်ရတာ.. ဒေါ်စု ဘုံပျောက်နေသမို့.. ဒေါ်စုကို သမ္မတရအောင်တင်မယ့်ပုံဟေ့..။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သမ္မတမဖြစ်ထိုက်ဘူးဆိုတဲ့ ၅၉ (စ) ဆိုတာကြီးကို ထည့်တွေးဖို့ကိုမလိုတော့ပါ။
သူကြီးကိုဘဲ ပြန်မေးရမှာဘဲ ..
သဂျီးမာမွတ်ခိုင် မအားဘူး… သဂျီးဂဒေါ် ပေါင်ဂျားဒဲ…. မှားယို့ ယင်ခွင်ကြားထဲ အိတ်နေရို့ ကိုယ်စားဖြေပေးမဲ….။ လိုလို့ စစ်တပ်နဲ့ ညှိနေရဒါပေါ့ဂျ၊ သူတို့မဲ မှိုရင် အများစုမဲနဲ့ တီးထည့်လိုက်ပီပေါ့ ဥနှစ်လုံးထဲနဲ့ ဘောင်းဘီကြက်နေဒဲ့ ကထူးဆန်းရှယ်….
ကြည့်ရတာ.. ခြေဥထဲပညာပါပါလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်..။ ၇၅%မလိုလောက်ဘူး..။
” ပုဒ်မ ၅၉ (စ) ရပ်ဆိုင်းခြင်းအပေါ် ဆရာဦးကိုနီ . . . သုံးသပ်ချက် … ”